Machadka Petroleum The - Waxbarashada sare dibadda ee Imaaraadka
Machadka Petroleum The
gaabinta : PI
aasaasay : 2000
Ha iloobin in aad discuss The Petroleum Institute
The Machadka Petroleum (PI) waa jaamacad injineernimada ah oo ku yaalla SAS Al Nakhl, Abu Dhabi, United Arab Emirates, waxay bixisaa noocyo kala duwan oo darajo injineernimada waxa maalgeliyey dallad ah shirkadaha shidaalka qaranka iyo kuwa caalamiga ah. Hadafka hay'ad waa in la siiyo saliidda deegaanka iyo warshadaha gaaska la injineerada.
PI la aasaasay 2000 by amar Emiri ah hoos jihada of sarraysnaantiisa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, taliye ee Abu Dhabi iyo Madaxweynaha Imaaraadka Carabta. Waxaa maal iyo maamulaa dallad ka kooban shan shirkadaha waaweyn ee shidaalka: ADNOC, Royal Dutch Shell, BP, Total S.A., iyo Shirkadda Horumarinta Japan Oil, hoosaad kulligeed iska leh ee INPEX. Jaamacadda waxaa iskaashi la jaamacadaha socda: Colorado School Macdanta (CSM), Johannes Kepler Universitat Linz, University of Maryland, University of Minnesota, The University of Texas ee Austin, Rice University iyo Shiinaha University of Petroleum.
PI ayaa qirtay ardayda ugu horeeyay ee Fall of 2001. Waqtigan xaadirka ah, ka badan 800 ardayda lab iyo undergraduate 100 ardayda dumar yihiin waxbarasho ee ka mid ah kuwan soo socda shan nidaamo injineernimada: Engineering farsamo, Petroleum Engineering, Engineering korontada, Engineering Chemical, Petroleum Geosciences,sayniska qoryshaynaya iyo sayniska wax.
Machadka Petroleum ayaa sidoo kale waxay bixisaa barnaamijyo heer graduate.
Center Research Institute Petroleum University iyo (PI) waxaa la aasaasay sannadkii Abu Dhabi, ee xarunta Imaaraadka Carabta ee 2001 gool noqdo hay'ad heer caalami ah oo waxbarashada injineernimada iyo cilmi warshadaha tamarta labada. PI ayaa ka badan 2000 ardayda undergraduate iyo graduate, ka badan 200 awood, oo uu leeyahay si deg deg ah u noqdaan wax bara sare iyo machad cilmi baadhis ee gobolka Bariga Dhexe. kafaala PI ayaa ka mid ah iyo kooxaha raacsan Company Oil Abu Dhabi Qaranka (ADNOC) iyo afar shirkadaha saliidda caalamiga ah oo wayn oo ka mid ah BP, Shirkadda Horumarinta Japan Oil, Shell iyo Total. campus waxay leedahay laboratories casri ah waxbarashada iyo goobaha fasalka, iyo ugu dhakhsaha badan martigalin doontaa xarun cilmi waaweyn, PI Research Center (XWKX) qorsheeyay in la furo in 2016.
2012, USA based Accreditation Board for Engineering and Technology (la raaco) granted accreditation to five engineering and applied sciences programs
Ma rabtaa discuss The Petroleum Institute ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Machadka Petroleum The rasmiga ah Facebook